Sida Sanjabiilka Caloosha/Cayilka Loogu Yareyo | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Wasmo Sida Sanjabiilka Caloosha/Cayilka Loogu Yareyo
Sida Sanjabiilka Caloosha/Cayilka Loogu Yareyo
Bulsha:- Sanjabiilka ayaa ah mid ka mid ah waxyaaalaha loo isticmaaala in lagu yareeyo cayilka iyo baruurta caloosha. Waxaa uu leeyahay antioxidants iyo anti-inflamatory kasoo kaalmeeya yareynta cayilka jirka.
Sidoo kale waxay yareyayaan caloosha wuxuuna kugu kaalmaynayaa inuu la dagaalamo cudurada kale oo jirka kujira sida sonkorta.
Qaabkaan oo isticmaalka sanjabiilka waxaa uu ka fiican yahay qaababka kale oo lagu jaro cayilka jirka. Waayo waxaa uu la dagaalamaa waxyaalaha cayilka keena. Waana waa qaab da biici ah oo si fiican aad ku caatowdid.
Waxaa uu keena caatonimo oo jirka oo dhan wada siman. Isticmaala sanjabiilka waxaa uu si siman cayilka u riddaa hal usbuuc gudahiisa. Waa haddii aad u isticmaashid qaababka aan hadda halkaan ku sheegi doono.
Sida Sanjabiilka loo isticmaalo
Waxaa jirra qaabab badan oo loo isticmaalo oo ka mid ah in shaaha lagu darsado, in cabitaanada cayilka yareeyo ahaan loo isticmaalo iyo qaabo kale oo kala duwan.
Qaabkan waa sida ugu wanaagsan oo wax kuoolka ah oo cayilka jirka lagu yareyo. Waxaana natiijadiisa arki kartaa hal usbuuc kadib haddii sida halkaan aan ku tilmaami doonto aad u isticmaashid
Sidee ayaa sanjabiilka loo isticmaalaa?
Marka koowaad waa in aad heshaa sanjabiil, jubad ama dhalo ama wax aad biyo ku qaadan kartid.
Sanjabiilka waa inuu mid qooyan ah ahaadaa ama mid mardhow beerta laga keenay.
Dhaq dhaq sanjabiilka oo biyaha wasakhada iskadaadi.
Jarjar ama xoqo adigoo isticmaalaysid mashiin ama qalabka karootka ama khudaarta lagu xoqo.
Markaad si fiican u jarjartid oo aad u yaryareysid, waxaad ku shubtaa dhalada ama waxa aad biyaha ku qaadan doontid.
Marka aad sidaas samaysid, waa in aad 30 daqiiqo aad siisid inuu biyahay ku dhicaamo.
Markaas kadib waxaad keliyoo cabtaa biyahaas qasan markasto aad biyo aad u baahatid inaad biyo cabtid.
Maalin kasta waa in aad sanjabiilka kale cusub aan xogataa oo kii hore aad daadisaa.
Biyo kale ama cabbitaanda kale ama cunniiyinka lagu naaxo waa cuni kartaa wax ay qaabkan wax ay ka bedelayaan ma jirto.
Waxaa keliyo lagaa rabaa inaad hal ama labba usbuuuc oo si joogto ah inaad u isticmaashid biyahaan sanjabiilka.
Waxaad dareemi doontaa in aad shaqasi ahaantaada isbedeshay . Caloosha ayaa kaa yaraanayso. Culeyska jirka ayaa kaa jarmaayo. Waxaad dadremaysaa inaad caato aan noqotay si kasta oo aad wax aad u cuntid.
Halmar haddii aad qaaabkan aad samaysid oo aad ku caatowdid ama culeyska aad yareysid. Waxay kugu qaadan doontaa waqti badan in aad soo naaxdid ama culeyskaada soo kordho.
Si dhaqsi ah ku cayili maysid. Waxaa waa wax iska caadi ah. hala welwelin. Waad caafimaad qabtaa.
Fadlan share dhex si aad dadka kale aad u gaarsiisid.